Qaar ka tirsan beelaha Puntland oo ka carooday kadib markii xukuumadda Deni ay xiniinyahooda farafareysay. – Madal Furan
Hoy > Warka > Qaar ka tirsan beelaha Puntland oo ka carooday kadib markii xukuumadda Deni ay xiniinyahooda farafareysay.
Editor November 13, 2019 November 13, 2019 Warka 0
Madal Furan – Madaxweyne Deni ayaa toddobaadyadan waxaa uu wajahayaa xasilooni la’aan siyaasadeed oo sida daadka uga soo burqaneysa qaar ka mid ah beelaha iyo siyaasiyiinta Puntland ee ka soo jeeda goboladda Bari, Sanaag iyo Sool.
Toddobaadkii la soo dhaafay ayay aheyd markii magaaladda Garoowe ciidamo daacad u ah Madaxweyne Deni ay weerareen xarunta Baarlamaanka Puntland halkaasoo ay ku dhinteen 5 qof oo rayid iyo dhinacyadii dagaalamayey isugu jira, isla markaasna sifo aan sharci aheyn xilka looga qaaday Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa isagana waxaa shaki weyn kaga jiraa in seeftii madaxweyne Deni ay luquntiisa dusha ka saaran tahay, wuxuuna door biday inuu gaashaan ka dhigto ciidamadii ku sugnaa difaaca Tuqaraq oo Tiknikadoodii la soo dul fariistay meel aan ka durugsaneyn Madaxtooyadda Puntland ee Garoowe.
Guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland Mudane C/xakiin Dhoobo Daareed ayaa isaguna xilligan marada walfinaya oo tola’ayeey kula dhex dhacay deegaanka uu ka soo jeedo ee gobolka Sanaag, wuxuuna ugu baaqay beelaha goboladda Bari, Sool iyo Sanaag inay isugu yimaadaan shir ay uga tashanayaan aayahooda, wuxuuna dhexda kaga jiraa abaabulkii ugu xoogga weynaa ee uu ku diyaarsanaayo ciidamo.
Beesha Muuse Saleebaan (Ugaar Saleebaan) ayaa iyaguna shalay gacanta ku dhigay hub iyo gaadiid ay kala wareegeen ciidamadda Puntland ee ku sugnaa aaga Kalabeyr, waxayna ula huleeleen deegaanka Dawacaley, balse, waxay makhribnimadii maata dib ugu soo laabteen magaaladda Kala-bayr, kuwaasoo qorsheynaya inay gudaha magaaladda Boosaaso u soo gudbaan saacadaha fooda inagu soo haya.
Beeshan ayaa si weyn uga carooday kadib markii xabsiga loo taxaabay Sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamadda Daraawiishta oo ay rumeysan yihiin in sifo aan sharci aheyn xukunkiisa la mariyey, waxaa kaloo ay qayb ka yihiin ololaha beelaha Puntland badankood ay ku doonayaan in dib-u-habeyn loogu sameeyo sharciga iyo saamiqeybsiga awoodeed ee nidaamka dowladda.
Beesha Moora Case (Dishiishe) oo iyaguna ka mid ah beelaha miisaanka weyn ku leh magaaladda ganacsiga ee Boosaaso ayaa waxaa ay ciidamo xoog leh iyo Tiknikaba ku diyaariyeen meel aan ka fogeyn Madaxtooyada magaaladda Boosaaso.
Maanta ayay aheyd markii ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira kuwa Daraawiishta Puntland iyo ciidamo beeleed ka soo jeeda Beesha Cali Saleebaan oo watay gaadiid dagaal iyo ciidamo farabadan ay fooda ku soo qaateen kontoroolka magaaladda Boosaaso, kadib markii dagaal kala hortageen ciidamo ay horkacayeen Wasiirka Ammniga Puntland, Guddoomiyaha Gobolka Bari iyo Taliyaha Qaybta Gobolka Bari.
Beelaha gobolka Mudug qaarkood ayaa waxay gacanta u haadinayaan Dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwaasoo durba codsaday in ciidamadooda loo qarameeyo kuraasna laga siiyo maamul goboleedka Gal-mudug.
Ugudanbeyntii, inta badan beelaha qaarkood ayaa si weyn uga cabanayaan in habraacii dhidibada loogu taagay Puntland laga weeciyey, isla markaasna dhibaatada uga weyni ka taagan tahay dhinacyada awooda qaybsiga maamulka, tayada iyo saraakiisha ciidamadda, horumarka iyo mashaariicda, sharciga iyo maxkamaddaha iwm.
Orodyahanada Mo Faarax iyo Haile Gebrselassie oo kiis xatooyo ah isku eedeynaya.
Daawo:- Puntland oo yeelatay Xildhibaano cusub + Liiska magacyada